मार्केटिंग रणनीति हराउने र २०१२ को विजेता | Martech Zone
मार्केटिंग रणनीति हराउनेहरू र २०१२ का विजेता
शुक्रबार, डिसेम्बर 21, 2012 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पछिल्ला वर्षमा फर्केर हेर्दा, मलाई विश्वास छ कि के मार्केटिंग रणनीतिहरू बढ्दै छन् भन्ने बारे स्पष्ट तस्वीर प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ... दुबै लोकप्रियता र परिणामहरूमा। यो रणनीतिहरू पहिचान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ जुन सर्कलमा मार्केटरहरू चलिरहेका थिए र वास्तवमा उनीहरूले खोजिरहेका वा आवश्यक परिणामहरू उत्पादन गरिरहेका छैनन्।
२०१२ को मार्केटिंग रणनीति हराउनेहरू
ब्याकलिinking्क - २०१२ मा हाम्रो अधिक विवादास्पद र लोकप्रिय पोष्ट मध्ये एक घोषणा गरिरहेको थियो SEO मरेको छ। जबकि धेरै एसईओ परामर्शदाताहरू शीर्षक पढ्ने बित्तिकै बाहिरबाट बाहिर निस्के, बाँकीले बुझे कि Google ले उनीहरूको मुनिबाट भर्चुअल कार्पेट निकालेको छ र तिनीहरूले एल्गोरिथ्मलाई ठग्न खोज्नुपर्‍यो र उनीहरूको ब्रान्डको खोजी अधिकार चलाउन मार्केटिंगको उपयोग गर्न सुरु गर्नुपर्‍यो। गुगलका लागि राम्रो र एसईओ ब्याकलिंकरहरूको लागि राम्रो सल्लाह।
QR कोडहरू - कृपया मलाई भन्नुहोस् उनीहरू मरेका छन्। त्यहाँ प्रायः टेक्नोलोजी उन्नतिहरू छन् जुन महान् समाधानहरू देखिन्छ जुन हामी मार्केटिंगमा लागू गर्न सक्छौं। दुर्भाग्यवस, मेरो विचारमा, QR कोडहरू तिनीहरू मध्ये कुनै एक पनि थिएन। हामीसँग इन्टरनेट भनिने यो अविश्वसनीय चीज छ जुन यूआरएल वा खोज टर्ममा टाइप गर्न तपाईलाई चाहिएको फेला पार्न सजिलो बनाउँदछ। मैले मेरो स्मार्टफोन खिच्ने बित्तिकै, मेरो क्यूआर कोड स्क्यानिंग अनुप्रयोग खोल्नुहोस्, र खोल्नुहोस् र यूआरएलमा जानुहोस् ... म यसलाई साधारणतया टाइप गर्न सक्थें। क्यूआर कोडहरू केवल बेकार हुँदैनन्, तिनीहरू कुरूप पनि हुन्छन्। म तिनीहरूलाई मेरो मार्केटिंग सामग्रीमा हेर्न चाहन्न। उत्तम समाधान छोटो यूआरएल हो, सर्टकोड टेक्स्ट गर्दै र प्रतिक्रियामा लिंक प्राप्त गर्दै, वा तपाईंको साइटमा एक राम्रो यूआरएल राखेर मानिसहरूलाई भ्रमण गर्न जान दिनुहोस्।
फेसबुक विज्ञापन - सत्यलाई भन कि म फेसबुक विज्ञापन प्रयोग गर्दछु र केहि अभियानहरूमा हामी कार्यान्वयन गरेकोमा राम्रो राम्रा प्रतिक्रियाहरू पनि पाएको छु। लागत कम गरिएको छ र त्यहाँ धेरै लक्षित अवसरहरू छन् ... तर म अझै मद्दत गर्न सक्दिन तर महसुस गर्छु कि फेसबुकले अझै मोडेल पत्ता लगाएको छैन। फेसबुक मोबाइलमा, मेरो स्ट्रिम विज्ञापनहरूको एक टनले भरिएको छ। वेबमा, म मद्दत गर्न सक्दिन तर सोच्दछु कि म कहिलेकाँही भित्ता प्रविष्टिहरूको लागि विज्ञापनका लागि भुक्तान गर्दैछु जुन प्रदर्शन गरिएको हुनुपर्छ। त्यसोभए ... फेसबुकले सामग्री लुकाइरहेको छ र त्यसपछि मलाई यसको लागि भुक्तानी गरिरहेको छ। Yuck।
गुगल - मलाई मन पर्छ कि त्यहाँ फेसबुक को एक प्रतिस्पर्धी हो लेकिन म यहाँ व्यक्तिगत रूप बाट संघर्ष गर्दैछु। जब फेसबुकमा 99 XNUMX% कुराकानी भइरहेको छ, मेरो लागि Google+ मा प्रयास लागू गर्न साँच्चै गाह्रो छ। गुगल + को उपयोग गरीरहेको छ - सशस्त्र सशस्त्र व्यक्तिहरु मा Google+ को उपयोग गरीरहेको छ लेखकत्व र स्थानीय व्यवसाय एकीकरण। तिनीहरूले समुदाय र ह्याoutsआउटको साथ केही उत्कृष्ट सुविधाहरू थपेका छन् ... तर मेरो समुदायमा कुराकानीहरू त्यहाँ भइरहेको छैन। म आशा गर्दछु कि परिवर्तन हुन्छ।
इमेल मार्केटिङ - प्रत्येक व्यवसायसँग ईमेल प्रोग्राम हुनुपर्दछ। कुनै मार्केटिंग रणनीतिको तुलनामा ईमेलबाट प्राप्त अधिग्रहण लागत अझै केहि सब भन्दा बलियो हुन्छ। मलाई विश्वास छ कि ईमेल मार्केटिंग एक हारेको छ, किनकि यो प्रगति भइरहेको छैन। हामीले अझै २० बर्ष पुरानो टेबल लेआउटहरू डिजाइन गर्नुपर्नेछ किनकि माईक्रोसफ्ट आउटलुक जस्ता ठूला इनबक्स अनुप्रयोग प्रदायकहरूले प्रगति गरेको छैन। यस्तो देखिन्छ कि ईमेललाई ओभरल गर्न सजिलो हुनेछ, व्यक्तिगत, विज्ञापन, र प्रतिक्रिया सन्देशको लागि मार्गहरू प्रदान गर्दै।
२०१२ को मार्केटिंग रणनीति विजेता
मोबाइल मार्केटिङ - इन्टरनेट पहुँचको साथ स्मार्टफोन्सको विशाल बृद्धि र यसको प्रयोगमा निश्चित रूपले कुनै श .्का छैन। सादा र सरल, यदि तपाईं मोबाइल वेब, मोबाइल अनुप्रयोगहरू र मोबाइल पाठ सन्देश पठाउँदै हुनुहुन्न भने, तपाईं बजारको महत्त्वपूर्ण अंशलाई अधोरेखित गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा एउटा व्यक्तिगत नोट ... म तल फ्लोरिडामा तल मेरा बाबुआमालाई भेट्दै छु र तिनीहरूले भर्खर आईफोनहरू खरीद गरे। जब तपाइँ औसत टेक्नोलोजी प्रयोगकर्ताको बारेमा सोच्नुहुन्छ, म तपाइँलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि यो मेरा आमा बुबा बुबा होइन।
सामग्री मार्केटिङ - मोबाइल अनुप्रयोग र मोबाइल खोजीको बृद्धि, एक अनुसंधान संयन्त्रको रूपमा इन्टरनेटको निरन्तर अपनाउने, र योजना, अनुसन्धान र इन्टरनेट मार्फत खरीद गर्न शपिंग ब्यवहारमा निरन्तर परिवर्तनको लागि आवश्यक छ कि तपाईंको कम्पनीले सामग्री खोजी गर्न खोज र सामाजिक अन्तरक्रिया समर्थन गर्दछ। जबकि कर्पोरेट ब्लगिaमुख्य रणनीतिको रूपमा फस्टाउन जारी छ, इन्फोग्राफिक डिजाइन, सामाजिक सामग्री साझा, eBooks, ह्वाइटपेपर र भिडियो पहिले भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्दै।
प्रस Marketing्ग मार्केटिंग - तपाईं मार्टेकमा याद गर्न सक्नुहुन्छ कि जब तपाईं विशिष्ट लेखहरू देख्नुहुन्छ, तपाईंले साइडबारमा पनि खास विज्ञापनहरू देख्नुहुनेछ। यी गतिशील कल-टु-एक्शन स्वचालित रूपमा प्रोग्राम हुन् ... कलसँग सामग्री प al्क्तिबद्ध गर्न प्रासंगिकता, क्लिक-थ्रु रेटहरू, र अन्ततः रूपान्तरण वृद्धि गर्न। सामग्रीमा आधारित राम्रो जानकारी प्रस्तुत गर्न डाईनामिक टेक्नोलोजीहरू लोकप्रियतामा बृद्धि भइरहेका छन् र अधिकांश व्यवसायहरूको लागि सस्तो लागतमा बृद्धि भइरहेका छन्।
प्रभाव मार्केटिंग - सामूहिक विज्ञापन विधिहरू हरेक दर्शकहरूको लागि सस्तो हुन सक्छ, तर एक प्रभावकर्ताले जोडीरहेको प्रकारको प्रभाव हुँदैन। हामीसँग यस ब्लगमा प्रायोजनहरू छन् जुन शानदार परिणामहरू प्राप्त गर्दै छन् - तर फाइदाहरू क्लिक भन्दा बढी छन्। हामी कम्पनीहरूसँग उनीहरूको आफ्नै रणनीतिहरूमा कार्य गर्दछौं, हामी तिनीहरूको बारेमा हाम्रो प्रस्तुतीकरण र भाषणहरूमा कथाहरू समावेश गर्दछौं, र हामी तिनीहरूको उत्पादनहरू र सेवाहरूको बाह्य प्रवक्ता भएका छौं। हाम्रो उद्योगमा हाम्रो प्रभाव छ र यी मार्केटिंग टेक्नोलोजी कम्पनीहरू हाम्रा दर्शकहरूमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। महान नयाँ अनुप्रयोगहरू जस्तै सानो चरा यी दर्शकहरू र उनीहरूका प्रभावकर्ताहरू फेला पार्न र पत्ता लगाउन अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्नुहोस्।
भिडियो मार्केटिङ - पेशेवर डिजाइन र विकसित भिडियोहरूको लागत देश भर ड्रप गर्न जारी छ। स्मार्टफोनको साथ जो कोहीले उच्च रिजोलुसन भिडियो उत्पादन गर्न सक्दछ - र आईमोभी जस्ता अनुप्रयोगहरूले संगीतको साथ बढाउन, भ्वाइसओभर थप्न, केहि ग्राफिक्समा लपेट्न, र यूट्यूबमा पुश गर्न सजिलो बनाउँदछ। Vimeo सजिलो संग। भिडियो एक बाध्यकारी माध्यम हो र दर्शकहरूको ठूलो प्रतिशत आकर्षित गर्दछ जसले पढ्नको लागि समय लिन सक्दैन।
मेरो सम्मानजनक उल्लेख विजेता is twitter। म सरकारहरू, धर्महरू, विद्यार्थीहरू र अन्य संगठनहरू द्वारा प्रभावी ढंगले आमसँग कुराकानी गर्न ट्विटरको प्रयोग गरेर ट्विटर प्रयोगको बारेमा धेरै कुरा गरिरहेको छु (सजायका लागि उद्देश्यले पोप!)। ट्विटर पनि छ नीलसेनसँग साझेदारी गर्दै परम्परागत मिडिया को लागि सगाई रेटिंग प्रदान गर्न।
मैले के याद गरें? के तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
टैग: ब्याकलिinking्कbacklinksसामग्री मार्केटिङप्रासंगिकईमेलइमेल मार्केटिङफेसबुक विज्ञापनGoogle +प्रभावमार्केटिंग भिडियोहरूमोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगमोबाइल मार्केटिङQR कोडहरूtwitterट्विटर मार्केटिंग
२०१२ ईन्टरनेट र मोबाइल ट्रेंडहरू
जनवरी 10, 2013 मा 6: 46 एएम
सहमत भए कि ब्याकलिंक्स र पुरानो एसईओ एकदम विवादास्पद थिए, तर मलाई लाग्छ कि दुबैले अझै २०१ 2013 मा मार्केटरको काममा प्रभाव पार्दछ। निस्सन्देह, तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा निर्माण गरिनुपर्दछ र राम्रो अभ्यासहरू पछ्याउनुपर्दछ। यो केवल धोका दिन को लागी प्रयास गर्नेहरुका लागि हराउने रणनीति थियो। मलाई यो पनि विश्वास छ कि २०१२ को मार्केटिंग रणनीति विजेताहरू
२०१ 2013 मा फस्टाउनुहुनेछ र तिनीहरूको महत्व बढ्नेछ। हामी ईर्चरको लागि विशिष्ट भिडियो मार्केटिंगको विकास गर्न चाहन्छौं। सफलताको लागि कुनै विधि छैन तर जब कम्पनीले रणनीतिहरूको एकरूप मिश्रणको साथ उल्लेखनीय ब्रान्डि creates सिर्जना गर्छ तब हार हुने छैन।